ChainCoin စျေး - အွန်လိုင်း CHC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ChainCoin (CHC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ChainCoin (CHC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ChainCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $25 137.00
volume_24h_usd: $4 184.30
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ChainCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ChainCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ChainCoinCHC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00291ChainCoinCHC သို့ ယူရိုEUR€0.00246ChainCoinCHC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00222ChainCoinCHC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00264ChainCoinCHC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0261ChainCoinCHC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0183ChainCoinCHC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0641ChainCoinCHC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0108ChainCoinCHC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00387ChainCoinCHC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00405ChainCoinCHC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0653ChainCoinCHC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0226ChainCoinCHC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0155ChainCoinCHC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.218ChainCoinCHC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.49ChainCoinCHC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00399ChainCoinCHC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00438ChainCoinCHC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0904ChainCoinCHC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0202ChainCoinCHC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.308ChainCoinCHC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.45ChainCoinCHC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.13ChainCoinCHC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.213ChainCoinCHC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0806
ChainCoinCHC သို့ BitcoinBTC0.0000002 ChainCoinCHC သို့ EthereumETH0.000007 ChainCoinCHC သို့ LitecoinLTC0.00005 ChainCoinCHC သို့ DigitalCashDASH0.00003 ChainCoinCHC သို့ MoneroXMR0.00003 ChainCoinCHC သို့ NxtNXT0.234 ChainCoinCHC သို့ Ethereum ClassicETC0.000399 ChainCoinCHC သို့ DogecoinDOGE0.806 ChainCoinCHC သို့ ZCashZEC0.00003 ChainCoinCHC သို့ BitsharesBTS0.111 ChainCoinCHC သို့ DigiByteDGB0.112 ChainCoinCHC သို့ RippleXRP0.00957 ChainCoinCHC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0001 ChainCoinCHC သို့ PeerCoinPPC0.00966 ChainCoinCHC သို့ CraigsCoinCRAIG1.32 ChainCoinCHC သို့ BitstakeXBS0.123 ChainCoinCHC သို့ PayCoinXPY0.0504 ChainCoinCHC သို့ ProsperCoinPRC0.362 ChainCoinCHC သို့ YbCoinYBC0.000002 ChainCoinCHC သို့ DarkKushDANK0.926 ChainCoinCHC သို့ GiveCoinGIVE6.25 ChainCoinCHC သို့ KoboCoinKOBO0.637 ChainCoinCHC သို့ DarkTokenDT0.00268 ChainCoinCHC သို့ CETUS CoinCETI8.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 18:55:02 +0000.